Pabrikan'i Ptfe Glass Fabric mora sy mpamatsy | Chengyang
Ny Ptfe Glass Fabric dia fananana manana toetra miavaka; tsy miraikitra, tsy misy fifandonana, manosotra tena, tsy mando, tsy mora mirehitra, tsy mora vaky, tsy misy poizina, mahatohitra ny toetran'ny atmosfera, mahatohitra ny fitomboan'ny holatra ary mahatohitra ny simika rehetra (afa-tsy ny metaly alkaly miempo sy fluorine ao mari-pana sy fanerena ambony). Ny fananana herinaratra dia miavaka tsara ihany koa. Ny fananana rehetra dia voatazona mandritra ny ambaratonga marobe -70 ºC. hatramin'ny + 260 ºC.
Vidin'ny FOB: USD4-5 / sqm
Previous: Lamba volontsôkôlà Teflon
Manaraka: Lamba vita amin'ny kofehin'ny karbaona tsy mitongilana
1. Inona ny MOQ?
2. Inona ny hatevin'ny lamba PTFE?
3. Azontsika atao ve ny manonta ny logo misy antsika amin'ny mat?
Sehatra PTFE, antsoina koa hoe ptfe, malama be, tsy afaka manonta na inona na inona amin'ny tsihy mihitsy
4. Inona ny fonosin'ny lamba PTFE?
Ny fonosana dia baoritra fanondranana.
5. Azonao atao ve ny mahazo ny haben'ny mahazatra?
Eny, azonay omena anao ny lamba ptfe tadiavinao habe.
6. Ohatrinona ny vidin'ny singa 100roll, 500roll, ao anatin'izany ny entana amin'ny alàlan'ny express any Etazonia?
Mila fantatrao hoe manao ahoana ny habeny, ny hatevinao ary ny zavatra takinao, amin'izay izahay afaka manisa ny entana. Miovaova isam-bolana ihany koa ny entana, hiteny aorian'ny fanontanianao marina.
7. Afaka mandray santionany ve isika? Ohatrinona no aloanao?
Eny, santionany izay haben'ny A4 dia maimaim-poana. Manangona na mandoa entana amin'ny kaonty paypal fotsiny fotsiny ny entana.
Etazonia / Euope Andrefana / Aostralia USD30, atsimo-atsinanana asia USD20. Faritra hafa, fintino misimisy
8. Haharitra hafiriana ny fahazoana santionany?
4-5days dia hahatonga anao hahazo santionany
9. Azontsika atao ve ny mandoa ny santionany amin'ny alàlan'ny paypal?
10. Hafiriana no hataon'ny mpanamboatra azy rehefa vita ny baiko?
Raha ny mahazatra dia 3-7 andro. Ho an'ny vanim-potoana be atao, qty mihoatra ny 100ROLL na fitakiana fanaterana manokana ilainao dia hodinihintsika tsirairay.
11. Inona no fahaizanao?
A. Famokarana. Fifaninanana vidiny
B. 20 taona traikefa fanamboarana. Orinasa faha-2 an-tsokosoko any Shina amin'ny famokarana fitaovana PTFE / vita amin'ny silipo. Fanandramana be dia be amin'ny fifehezana kalitao sy kalitao tsara kalitao.
C. Famolavolana iray, famokarana batch kely na antonony, serivisy famolavolana lamina kely
D. BSCI nohamarinina ozinina, traikefa amin'ny tolotra amin'ny fivarotana lehibe any Etazonia sy EU.
E. Fandefasana haingana sy azo itokisana
Fiberglass mifono teflon
Lamba anti-static Ptfe Fiberglass
Lamba Fiberglass mora vidy
Lamba Fiberglass Ho an'ny fanamboarana sambo
Lamba Fiberglass 0.8mm
Lamba Fiberglass Aluminized, Lamba vita amin'ny acrylic Fiberglass, Fiberglass mifono akrilika, Clot Fiberglass, Lamba lamba vita amin'ny ravin-kazo vita amin'ny kofehy, Lamba vita amin'ny vera vita amin'ny acrylic,